Saodiana Mpanangana Tranonkala Migadra sy Kapohina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2013 15:08 GMT
Nohelohina fito taona am-ponja sy kapoka in-600 androany maraina [29 jolay] ny mpanangana ny tranonkala “Free Saudi Liberals” [Afaho ny Liberaly Saodiana] antsoina hoe Raif Badawi. Voasambotra tamin'ny 17 Jona 2012 tao Jeddah i Badawi ary noampangaina ho “nanangana tranonkala manimba ny filaminam-bahoaka” sy manaratsy ny mpitari-pivavahana Islamika malaza.
Dinika antserasera misokatra ho an'ny daholobe ny tranonkala Afaho ny Liberaly Saodiana. Nikatona izany taorian'ny nisamborana an'i Badawi, ary efa voasakana an-taonany maro tao amin'ny firenena. Hita tao amin'ny didim-pitsarana androany ihany koa ny didy hanakatonana tanteraka ny tranonkala:
@abualkhair: Tao amin'ny didim-pitsarana ny raharaha Raif Badawi androany, nodidian'ny mpitsara ny fanakatonana ny tranonkalan'ny Afaho ny Liberaly Saodiana.
Tamin'ny 7 Desambra 2012, nalefa tany amin'ny fitsarana ambaratonga ambony ny raharaha, tao amin'ny Fitsarana ankapobeny ao Jeddah, taorian'ny niampangana azy ho niala [nihemotra] tamin'ny finoana, izay mitarika mankany amin'ny famonoana ho faty. Niangaviana i Badawi handao ny fomba fijeriny saingy nandà.
Nanan-janaka telo izay nandao ny firenena niaraka tamin'ny reniny i Badawi taorian'ny fisamborana azy. Any Beirit ao Libanona ry zareo amin'izao fotoana izao.
Ny Amnesty International dia mametraka azy ho “gadra noho ny heviny notazonina noho ny fampiharany am-pilaminana ny zony hiteny malalaka” ary nitaky ny hamotsorana azy tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra.